Mwedzi yegore muChirungu - UniProyecta
Kana iwe uchida kudzidza mutauro wepasirese nekukurumidza uye nyore, nzira yakanakisa ndeyekuti uzviite kuburikidza nekudyidzana, mavhidhiyo uye kunyangwe kudzidzira nziyo dzinosanganisira ese mwedzi yegore muChirungu. Uyu mutauro wakanyatso kuwana ruremekedzo rwavo rwakakodzera, zvekuti parizvino rwunova pekutanga semutauro munyika yemukurumbira nebhizinesi.
Rangarira kuti nekudzidza mutauro mutsva, unogona kuve nani kune vamwe vanhu, dzimwe tsika netsika; Izvo zvakare zvakanakisa kana iwe wafunga kutsvaga basa, nekuti rinokukwidziridza iwe muchikamu uye rinokutendera kuti umire kunze zvine hunyanzvi.
Kana iwe uchida kuisa nguva mumutauro mutsva, asi iwe usiri kuda kuibhadhara, iwe unofanirwa kufunga nezve mamwe mazano anozoita kuti uzviite munguva pfupi:
1 Mataurirwo emwedzi muChirungu
1.1 gara zvakanaka
1.2 Tarisa zvishandiso zvakanakisa
1.3 Ita zvirevo uye unakirwe
1.4 Dzidziswa uye zadzisa zviroto zvako
Mataurirwo emwedzi muChirungu
Zviri Nyore chaizvo !!
Iyi ndiyo nzira inoshandiswa kudzidzira chero kurovedza muviri, unogona kuita kufungisisa uye kunyangwe kubika. Kana yakagadzikana, muviri wedu unozorora uchirerutsa kutora kwekudzidza, saka zvakanaka kana iwe uchida kupinda munyika yeChirungu.
Tarisa zvishandiso zvakanakisa
Iye zvino tine chishandiso chakakosha iyo dandemutande, mairi unogona kufamba uye kutsvaga mapeji anoita kuti kudzidza kwako kuve nyore. Rangarira kuti kune akawanda mablog uye mavhidhiyo ekudzidzisa ekudzidza mukati memwedzi yegore mu English vakasununguka; ivo vanokutendera kwete chete kuti uone, asi kuti unzwe mataurirwo uye zvakanakisa pane zvese, iwe unogona kuenda pane yako wega kumhanya.
Ita zvirevo uye unakirwe
Kunyora zvinyorwa zvezvauri kudzidza zuva nezuva chinhu chakakosha, izvi zvinokutendera kuti uchengetedze ruzivo uye kuribvunza paunenge uchifunga kuti zvakakosha; Iwe unogona kusarudza yakanaka ajenda uko kwaunochengeta zvisingaenzaniswi zviito, zvirevo zvemunhu kana mazwi akakosha aunodzidza zuva nezuva.
Zvakare kana iwe uchida kana iwe uchida kunakidzwa zvishoma, ingoteerera kumimhanzi yeChirungu kujairira nzeve yako uye uchaona kuti iwe unodzidza mune zvishoma pane zvaunofunga.
Dzidziswa uye zadzisa zviroto zvako
Mushure mekunge iwe wadzidza kunyangwe zvishoma, ita hurukuro yega yega 3 mwedzi yegore in Shona Neshamwari iri chizvarwa chemutauro kana nemumwe munhu anotoziva matauriro acho, mutauro uyu unowedzera mikana yako kunyangwe iwe uchida kuenda parwendo nemhuri yako kana kana uchisarudza chinzvimbo chiri nani chebasa.
Nekuziva mumwe mutauro iwe uri kuchinja hupenyu hwako zvachose. Uri kuzvivhurira wega kuzere kudzidza, iwe unozokwanisa kufamba pasina matambudziko, kuita shanduro, tarisa mafirimu asina zvinyorwa zvidiki pakati pezviuru zvakawanda zvezvakanaka iwe zvauchazove nazvo kana ukafunga kuti zviitike.
kudzidziswa » Mitauro » Shona » Mwedzi yegore muChirungu
3 mazwi pamusoro «Mwedzi yegore muChirungu»
Kurume 27, 2018 pa5: 44 pm
Ndinonyatsoda peji rino nekuti ndiri kudzidza Chirungu zvakanyanya, ndatoziva manhamba kubva pa1 kusvika pa100 kuburikidza neiri peji, ndatenda
Kurume 27, 2018 pa5: 46 pm
Handizive kuti chebere iri peji iri, ndinorida, maita basa
Chivabvu 1, 2018 na3: 36 pm
Zvakanaka chaizvo ndinozvida